विषय: अत्तर, पन्तियस पिलातस, शिरपोस | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको उज्बेक उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) गाउरानी गुजराती गून ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापटेक (इस्मस) जापानी टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली डच डेनिश ताजिकी तामिल तेलगु तोक पिसिन थाई नर्वेली नेपाली पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्गोलियन मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
अत्तरको गन्ध सहनै नसक्ने स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई कसरी मदत गर्न सकिन्छ?
अत्तरको गन्ध सहनै नसक्ने स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको लागि त्यो एउटा ठूलो चुनौती हो। हरेक दिन विभिन्न मानिसहरूसित उठबस गर्नुपर्ने भएकोले तिनीहरू चाहेर पनि अत्तरको गन्धबाट पूर्णतया अलग बस्न सक्दैनन्‌। सभा, सम्मेलन तथा अधिवेशनहरूमा जाँदा अत्तर नलगाउन आग्रह गरिदिन मिल्छ कि भनेर कसै-कसैले सोधेका छन्‌।
हामी सबैलाई सभाहरूबाट पाइने प्रोत्साहन चाहिन्छ। (हिब्रू १०:२४, २५) त्यसैले कुनै पनि ख्रीष्टियनले जानाजानी अरूलाई सभाहरूमा उपस्थित हुनदेखि बाधा पुऱ्याउन चाहँदैनन्‌। कसै-कसैलाई भने अत्तरको गन्ध सहनै नसक्ने स्वास्थ्य समस्या भएकोले सभामा बस्नै गाह्रो हुन सक्छ। उनीहरूले यस विषयमा एल्डरहरूसित कुरा गर्न चाहलान्‌। हुन त सभामा आउँदा अत्तर लगाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा नियमै बनाउनु उचित होइन अनि त्यसो गर्नु धर्मशास्त्रसित मेल पनि खाँदैन। तैपनि अत्तरको गन्धले गर्दा अरूले भोग्नुपरेको समस्याबारे एल्डरहरूले मण्डलीका सदस्यहरूलाई जानकारी भने दिन सक्छन्‌। एल्डरहरूले अवस्था हेरेर सेवा सभाको स्थानीय आवश्यकताको भागमा हाम्रा प्रकाशनहरूमा पहिल्यै छापिइसकेको विषयवस्तु छलफल गर्ने निर्णय गर्न सक्छन्‌। अथवा विवेकी हुँदै यस विषयमा घोषणा गर्ने निर्णय पनि गर्न सक्छन्‌। * तर एल्डरहरूले अत्तरको प्रयोगबारे घरीघरी घोषणा गर्नु राम्रो हुँदैन। साथै, हाम्रो सभामा हरेक हप्ता नयाँ-नयाँ व्यक्तिहरू आउँछन्‌ र तिनीहरूलाई त्यो समस्याबारे थाह हुँदैन। ती व्यक्तिहरूले हाम्रा सभाहरूमा सजिलो मानेको हामी चाहन्छौं। अत्तर लगाएर आएकोमा हामी तिनीहरूलाई लाज वा अप्ठ्यारोमा पार्न चाहँदैनौं।
स्थानीय परिस्थितिले दिन्छ भने एल्डरहरूको निकायले अत्तरको गन्ध सहनै नसक्ने स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको लागि राज्यभवनमा कुनै अलग्गै ठाउँको प्रबन्ध मिलाउन सक्छ। जस्तै, राज्यभवनमा कार्यक्रम सुन्न सकिने दोस्रो हल वा अरू कुनै कोठा छ भने त्यहाँ राख्न सकिन्छ। तर जे गरे पनि समस्या समाधान भएन र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अझै पनि गाह्रो भइरहेको छ भने के गर्न सकिन्छ? घरैमा बस्न बाध्य भएकाहरूको लागि जस्तै तिनीहरूको लागि पनि कार्यक्रम रेकर्ड गरेर घरैमा लगिदिने वा टेलिफोनमार्फत कार्यक्रम सुनाउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ।
हालैका वर्षहरूमा हाम्रो राज्य सेवा-ले ख्रीष्टियनहरूलाई अधिवेशनमा उपस्थित हुँदा यो विषयमा होस पुऱ्याउन सल्लाह दिएको छ। धेरैजसो ठाउँमा हाम्रा अधिवेशनहरू आयोजना गरिने हलहरूमा हावा प्रवाहको लागि विघुतीय उपकरणहरू जडान गरिएको हुन्छ। त्यस्ता हलहरू चारैतिर बन्द हुने भएकोले ताजा हावा खेल्न पाउँदैन। साथै, अधिवेशन हुने हलहरूमा अत्तरको गन्ध सहनै नसक्ने स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई राख्न सकिने छुट्टै ठाउँको प्रबन्ध मिलाउन सधैं सम्भव नहुन सक्छ। त्यसैले अधिवेशन जाँदा कडा गन्ध भएको अत्तरको प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिएको हो। तर यो निर्देशनलाई मण्डलीका सभाहरूमा नियमको रूपमा लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो अभिप्राय थिएन र त्यसलाई नियमै बनाउनु पनि हुँदैन।
हामी सबै त्रुटिपूर्ण भएकोले नयाँ संसार नआएसम्म विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू झेल्नुपर्ने हुन्छ। अरूले हाम्रो अवस्था बुझिदिंदा हामीलाई खुसी लाग्छ। कुनै भाइ वा बहिनीलाई ख्रीष्टियन जमघटमा उपस्थित हुन सजिलो होस् भनेर कसै-कसैले अत्तर नलगाउने निर्णय गर्न सक्छन्‌। यसो गर्नु पनि एक किसिमको त्याग नै हो। हामी अरूलाई प्रेम गर्छौं भने त्यस्तो त्याग गर्न तयार हुन्छौं।
के बाइबलबाहेक अन्य स्रोतसामग्रीले पनि पन्तियस पिलातसको अस्तित्वबारे बताउँछ?
ढुङ्गाको यो पाटीमा पिलातसको नाम ल्याटिन भाषामा खोपिएको छ
बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरूलाई पन्तियस पिलातसबारे राम्ररी थाह छ किनकि तिनी पनि येशूको पुर्पक्ष र हत्यामा मुछिएका थिए। (मत्ती २७:१, २, २४-२६) तर तिनको नाम त्यतिबेलाका अरू ऐतिहासिक रेकर्डहरूमा पनि थुप्रै चोटि उल्लेख गरिएको छ। एउटा शब्दकोशले * बताएअनुसार इतिहासका पानाहरूमा पिलातसको व्यक्तिगत विवरण “यहूदियाका अरू कुनै पनि रोमी राज्यपालको भन्दा लामो अनि विस्तृत छ।”
यहूदी इतिहासकार जोसेफसको लेखोटमा पिलातसको नाम थुप्रै पटक उल्लेख गरिएको छ। यहूदियामा शासन गर्दा पिलातसले सामना गर्नुपरेको तीनवटा चुनौतीबारे तिनले लेखेका छन्‌। यहूदी इतिहासकार फाइलोले भने पिलातसले भोग्नुपरेको चौथो चुनौतीबारे रेकर्ड गरेका छन्‌। पन्तियस पिलातसले येशूलाई मृत्युदण्ड दिने आदेश टाइबेरियसको शासनकालमा दिएका थिए भनी रोमी लेखक ट्यासिटसले बताए। तिनले रोमी सम्राट्हरूको इतिहास पनि रेकर्ड गरेका थिए।
इजरायलको सिजरियामा रहेको पुरातन रोमी रङ्गशालाबारे अध्ययन गर्ने क्रममा सन्‌ १९६१ मा अन्वेषकहरूले पुनः प्रयोग गरिएको ढुङ्गाको पाटी भेट्टाए। त्यसमा ल्याटिन भाषामा पिलातसको नाम खोपिएको थियो। त्यो शिलालेख (तल देखाइएको) सग्लो नभए पनि त्यसमा यस्तो लेखिएको अनुमान गरिएको छ, “यहूदियाका प्रशासक पन्तियस पिलातसले (यो) टाइबेरियम सम्माननीय देवताहरूलाई समर्पित गरेका हुन्‌।” सम्भवतः त्यो भवन (टाइबेरियम) रोमी सम्राट् टाइबेरियसको सम्मानमा बनाइएको मन्दिर थियो।
कुनै भाइको उपस्थितिमा अध्ययन सञ्चालन गर्नुपर्दा कुनै बहिनीले शिरपोस लगाउनुपर्छ कि पर्दैन?
जुलाई १५, २००२ अङ्कको प्रहरीधरहरा-मा प्रकाशित “पाठकहरूको प्रश्न”-मा कुनै बहिनीले कुनै भाइको उपस्थिति­मा अध्ययन सञ्चालन गर्नुपर्दा तिनले शिरपोस लगाउनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको थियो, चाहे ती भाइ बप्तिस्मा प्राप्त होस् वा बप्तिस्मा अप्राप्त। तर यस विषयबारे गहिरिएर विचार गर्दा यस बुझाइमा केही छाँटकाँट गर्नुपर्ने भएको छ।
यहोवाले सिकाउने जिम्मेवारी पुरुषहरूलाई दिनुभएको छ। कुनै बहिनीले अध्ययन सञ्चालन गर्दा तिनले कुनै भाइले गर्नुपर्ने काम गरिरहेकी हुन्छिन्‌। त्यसैले बप्तिस्मा प्राप्त भाइको उपस्थितिमा नियमित रूपमा भइरहेको अध्ययन सञ्चालन गर्नुपर्दा ख्रीष्टियन बहिनीले शिरपोस लगाउनु­पर्छ। यसो गर्दा तिनले शिरत्वसम्बन्धी यहोवाले गर्नु­भएको प्रबन्धको कदर गरिरहेकी हुन्छिन्‌। (१ कोरि. ११:५, ६, १०) तर ती भाइले राम्ररी अध्ययन गराउन सक्छन्‌ भने तिनले उनलाई नै अध्ययन गराइदिन आग्रह गर्न सक्छिन्‌।
अर्कोतर्फ कुनै बहिनीले बप्तिस्मा अप्राप्त भाइको उपस्थिति­मा नियमित रूपमा भइरहेको अध्ययन सञ्चालन गर्नुपरेको छ र ती भाइ तिनको श्रीमान्‌ होइनन्‌ भने तिनले शिरपोस लगाउनुपर्ने कुनै धर्मशास्त्रीय आधार छैन। तर कसै-कसैले भने आफ्नो अन्तस्करणको कारण शिरपोस लगाउने निर्णय गर्न सक्छन्‌।
^ अनु.4यस विषयमा बुझ्न अगस्त ८, २००० को ब्यूँझनुहोस्!, पृष्ठ ८-१० मा भएको “एमसिएस बिरामीहरूलाई मदत गर्ने” भन्ने लेख हेर्नुहोस्।
^ अनु.9The Anchor Bible Dictionary
पाठकहरूको प्रश्न—फेब्रुअरी २०१५